पढ्नुहोस् अनी शेयर गर्नुहोस्! महान दार्शनीक प्लेटोका विशेषोपयोगी १८ भनाईहरु! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
पढ्नुहोस् अनी शेयर गर्नुहोस्! महान दार्शनीक प्लेटोका विशेषोपयोगी १८ भनाईहरु!
काठमाडौं । प्लेटोको जन्म एथेन्सको नजिकै ईजिना नामक द्विपमा भएको थियो । उनको परिवार एक सामन्त वर्गको थियो ।उनका पिता अरिस्टोन र माता पेरिक्टोन इतिहासका प्रसिद्ध कुलिन नागरिक हुन् । ४०४ ईसाईपूर्वमा उनले सुकरातबाट शिक्षा लिएका थिए । उनी ४२८/४२७-३४७/३४८ मा जन्मिएका थिए ।
महान दार्शनीक प्लेटोका विशेषोपयोगी १८भनाईहरु:-
१. गरिबीको कारण सम्पत्तिको कमी होइन,चाहनाहरु धेरै भएर हो ।२. हामी जे कुराको इच्छा राख्छौँ,कालान्तरमा हामी त्यहि बन्छौँ ।३. ज्ञान भनेको आफूभित्र भएको कुरालाई फेरी पत्ता लगाउँनु हो ।४. सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति भनेको थोरुैमा सन्तुष्ट भएर बाँच्नु हो ।
५. सोच्नु भनेको नितान्त आफ्नै आत्मासँग कुरा गर्नु हो ।६. शिक्षा भनेको हाम्रा सन्तानलाई राम्रा कुराको चाहना गर्न सिकाउँनु हो ।७. सबैभन्दा पहिलो र सबैभन्दा उत्कृष्ट जित भनेको आफूमाथि विजय पाउँनु हो ।
८. कसैले जति नै ढिला भए पनि निरन्तर केहि न केहि प्रगति गरिरहेको छ भने,त्यसलाई निरुत्साहित पार्ने काम नगर, यदि तिमी स्वयं नै त्यो व्यक्ति होउ भने पनि ।९. आफ्नो गुफा भन्दा बाहिर निस्किनु मेरो साथी हो, हो बाहिर केहि चिसो छ, तर त्यहाँबाट आकाशका ताराहरु धेरै सुन्दर देखिन्छन् ।१०. जसले सिकीमात्रै रहन्छ तर केहि गर्दैन भने त्यस्तो व्यक्तिले जोत्छ मात्रै केहि गर्न सक्दैन ।
११. जसले कुनै शक्तिको इच्छा राख्दैन उ नै सो शक्ति पाउँने उपर्युक्त व्यक्ति हो ।१२. सबै भन्दा खराब न्याय भनेको न्याय दिएको जस्तो नाटक गर्नु हो ।१३. आफ्नो सन्तानलाई तपाईको इच्छा अनुसार हिँड्न बाध्य नगराउनुहोस्, उनीहरु छुट्टै समयको लागि बनेका हुन् ।
१४. तीन श्रोतहरुबाट मानिसको व्यवहार प्रदर्शित हुन्छ,चाहना,भावना र ज्ञान ।१५. प्रत्येकसँग नम्र बोल,किनभने तिमीले जसलाई भेट्छौ उ पनि आफैमा कुनै कठिन लडाई लडिरहेको हुनसक्छ ।१६. वास्तविकता भनेको हाम्रो मस्तिष्कमा श्रृजित हुने कुरा हो,यदि
हामीले आफ्नो सोच बदल्छौँ भने वास्तविकता आफै बदलिन्छ ।
१७. यदि तिमी सरकारको चालचलन प्रति कुनै महत्व राख्दैनौँ भने तिमी मूर्खहरुद्वारा शासित हुन बाध्य हुन्छौ ।१८. सत्य बोल्नेलाई जति घृणा अरु कसैलाई गरिँदैन ।
Previous सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ७० करोड क*मिसनका लागि यसरी गरे से**टीङ !
Next उमेर बढ्दै गएपछि ‘सिंगल’ रहने चाहाना पनि बढ्छः एक अध्ययन!